အာရှကစကော်လားရှစ်တွေကို ထပ်ပြီး စုထားပေးပါတယ်။
စင်္ကာပူ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုးရီးယား ၊ဟောင်ကောင်က စကော်လားရှစ်တွေအပြင်အခြား အာဆီယံစကော်လားရှစ်တွေ များစွာ ပါပါတယ်။
မိမိတက်ချင်သောကျောင်းနဲ့ ဘာသာရပ်တွက် အောက်က ပညာသင်ဆုတစ်ခုချင်းစီကို
သေချာဝင်ဖတ်ပြီး လိုအပ်တာပြင်ဆင်ထားနိုင်၊ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
USTC Scholarship Program - The University of Science and Technology of China (USTC) offers scholarships for international degree-seeking or exchange students, which award free tuition, free housing, health insurance andamonthly living allowance.
Japanese Government MEXT Scholarships for International Research Students – Government scholarships to study in Japan onagraduate-level research program. The next round of applications opens in April 2020.
#InternationalScholarships #Asia #AsianScholarships #ISFMS #scholarshipformyanmar
5,039 views0 comments
CMU Presidential Scholarship, Thailand
Child’s Dream University Scholarship